Ekwenyere m na onye ọ bụla nwere ike ịhụ nchekwa na arụmọrụ ahụike nke nzacha ọgwụ, n'ihi na isi nri niile echekwara kwesịrị ịgafe usoro amụrụ afọ, iji hụ na ahụike nke nri. Ahụmịhe dị na nchekwa bụ na akụrụngwa a ga-eji valvụ nchekwa, nrụgide nrụgide na temometa rụọ ọrụ iji hụ na nchekwa ahụ, izu ezu, nghọta na ntụkwasị obi nke akụrụngwa ahụ. N'ime usoro ojiji kwesịrị ịbawanye mmezi yana mmezi oge niile. Mmetụta mmalite nke valvụ nchekwa ahụ dị ka nrụgide nrụpụta ma kwesiri inwe mmetụta na ntụkwasị obi. Iji hụ na njirimara ndị dị n'elu, ọ dị mkpa ka arụ ọrụ nke sterilization retort n'ụzọ dị otú a.
1. Ekwesighi igbochi mgbanwe aka ike. Gauges na temometa bụ klas ziri ezi nke 1.5 na ọdịiche dị na oke njehie ahụ bụ ihe nkịtị.
2. Tupu ịbanye na nkwụghachi oge ọ bụla, onye ọrụ ahụ ga-enyocha ma enwere ndị ọrụ ma ọ bụ sundries ndị ọzọ na nkwụghachi azụ, wee kpụga ngwaahịa ahụ na nkwụghachi azụ mgbe ha gosipụtara na ọ dị mma.
3. Tupu etinye ngwaahịa ọ bụla na retort, lelee ma mgbanaka akara nke ọnụ ụzọ retort mebiri emebi ma ọ bụ si na uzo, wee mechie ma kpọchie ọnụ ụzọ mbata ahụ mgbe ị kwadoro ya.
4. N'oge ọrụ nke akụrụngwa ahụ, onye na-arụ ọrụ ga-enyocha ọnọdụ ọrụ nke nlele nrụgide, ọkwa ọkwa mmiri na valvụ nchekwa na saịtị, ma dozie nsogbu ọ bụla na oge.
5. Etinyela ngwaahịa ahụ n'ime ma ọ bụ pụọ na nlọghachi iji gbochie mmebi nke pipeline na ihe mmetụta okpomọkụ.
6. N'ihe banyere mkpu n'oge ọrụ nke akụrụngwa, onye na-arụ ọrụ ga-achọpụta ngwa ngwa ihe kpatara ya. Were usoro kwekọrọ.
7. Mgbe onye ọrụ na-anụ ngwụsị nke ọrụ wee zipụ mkpu, ọ / ya kwesịrị imechi ngbanwe njikwa na oge, mepee valve na-ekpochapu, hụ ihe ngosi nke nlele nrụgide na nlele ọkwa mmiri, ma kwenye na ọkwa mmiri na nrụgide na esi mmiri ọkụ bụ efu. Mepee ụzọ nkwụghachi.
8. A machibidoro ya iji igwe eji ọrịa arụ ọrụ. Ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla, gwa ndị ọrụ na-edozi akụrụngwa n'oge. A machibidoro iwu ịtọsasị na ilekọta igwe na-enweghị ikike.
9. Mgbe ị na-ehicha ma na-ehichapu akụrụngwa, a ga-echedo ihuenyo ngosi nke na-arụ ọrụ iji hụ na ihuenyo ngosi ahụ kpọrọ nkụ na enweghị mmiri.